Ikhaya IZITOLO EZIZWELONKE ZOKWENZA IFOOTBALL Abadlali bebhola lebhola lesiNgisi James Maddison Childhood Story Plus Mahhala Lalela Funda Kudivayisi kuphela Kwengeziwe Buka
I-LB ibonisa iNdaba Egcwele ye-Football Genius eyaziwa kakhulu ngesiteketiso "Madder". Indaba yethu ye-James Maddison Childhood kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yezenzakalo eziphawulekayo kusukela ngesikhathi sakhe sokuzalwa kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela ukuphila kwakhe kwasekuqaleni, imvelaphi yomndeni, indaba yokuphila ngaphambi kokudumo, ukuphakama emlandweni wezindaba, ubuhlobo nokuphila komuntu siqu njll.
Yebo, wonke umuntu uyazi ukuthi ungomunye wabadlali abahamba phambili baseNgilandi abahlasela isizukulwane sakhe. Kodwa-ke, bambalwa abambheka nge Biography kaJames Maddison okuthakazelisayo kakhulu. Manje ngaphandle kokuqhubeka kwe-ado, ake siqale.
James Maddison Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Isiqalo sokuphila
UJames Daniel Maddison wazalwa ngosuku luka-23rd lukaNovemba 1996 kunina, u-Una Maddison nobaba, uGary Maddison eCoventry, eNgilandi. UJames wazalwa njengendodana yokuqala nendodana kubazali bakhe abathandekayo, u-Una noGary abafanekisa.
Umthombo kaJakobe Maddison:
Ngokuphambene nenkolelo evamile, uJames Maddison uvela eRiphabhlikhi yase-Ireland ngenye komkhulu wakhe ogogo nomkhulu abangama-Irish.
U-Maddison wakhula nomfowabo omncane futhi ekuqaleni wayevela emlandweni womndeni ophakathi. Lokhu kwakungaphambi kokuba izimali zebhola lezinyawo ziphakanyise indlu yakhe. Emuva ngaleso sikhathi, yena wayenakho umndeni womndeni osondelene obenamalungu amaningi aseManchester United ahlanganisa uJames ngokwakhe. Ngezansi ucezu lwevidiyo ekhombisa ukuthi uMaddison ugqoke iJersey eManchester ngenkathi edlala ibhola njengomfana.
Wathandana kanjani nomdlalo:
Ikhaya lomndeni kaJakobe Maddison lalingamakhilomitha amabili ukusuka ku-Alan Higgs Centre okuyindawo yaseCoventry City Football Academy.
Lokhu kusondelana kwakusesizathu sokuthi uMaldison abe nesithakazelo esiqhubekayo ekubeni yiprofethi engakaze ibone njengenganekwane edlula.
James Maddison Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Umsebenzi Wokuqala
Ngokungangabazeki ibhola lihola uMaddison osemusha ekukhethweni kwamathuba omsebenzi ayengayenza lapho eseyingane. Uqale ngokufaka abazali bakhe ukubhalisa njengomfundi we-pre-Academy ngenkathi esekhona e-Richard Lee Primary School.
Iminyaka engu-pre-academy yaseMaddison yasize ibekwe kuye isisekelo esihle sebhola ekugcineni ekukhokha ngokucacile izabelo zayo. Wayengomunye wabadlali bebhola lezinyawo abachitha isikhathi sabo (emva kwamahora esikoleni) bedlala ibhola, umdlalo kuphela abawuthandayo. Ngaphansi kwalesi siqeshana sevidiyo ubufakazi bokuthi iseshini yokuqeqesha i-pre-academy kaMaddison okwenzeka ngo-March 2004.
Ukuphila Kwakuqala eCoventry Academy:
UMadison wayephakathi kwezingane ezincane kunazo zonke ezedlula izivivinyo zezemfundo ezazibhalela nentsha yaseCoventry eneminyaka eyi-9. Lesi yisikhathi lapho abazali bakhe beba khona isikole sakhe. Maddison ngalesi sikhathi waya eKaludon Castle School.
Ukuphila esikoleni kuyamnandi, kodwa uMddison kwakudingeka enze imihlatshelo eminingi kusenesikhathi. Washesha ukukhuphuka indlela yakhe esuka kumfana omncinyane kunazo zonke ukuya kumfundi ongcono kakhulu esikoleni sakhe seminyaka. Ukukhula okunjalo kwavela ngenxa yokusebenza kanzima okwaholela ekutholeni imiklomelo emdlalweni wakhe wokubamba iqhaza emidlalweni yokuncintisana. Bona ubufakazi bevidiyo ngezansi;
James Maddison Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Umgwaqo oDumela
UJames Maddison ngesikhathi eseneminyaka eyishumi nambili eqala ukukhombisa ukusikeka komdlali oyedwa kanye nomdlali weqembu lakhe leCoventry. Naphezu kokuba mncane, uMaddison waba Bonisa-Umfana ngubani ozoletha noma nini lapho edingwa ukudala imigomo. Lokho okwaholela kuye kwanikezwa i-No: iJersey 10.
"Cha: Imisebenzi ye-10 yangisiza ukuba ngakhe ubuntu bami ngoba phakathi kwasemaphakathi kwakugcwele abafana abakhulu, abaqinile abadlala imidini yokuvikela njengabaphikisi," kusho uMaddison.
Ngezansi ukuqinisekiswa kwevidiyo uJames Maddison ekudalweni kwamagunya okuqala kanye nekhono lokusetha.
Ukuba Umqoqo Wezihloko:
UJames Maddison ngokusho TheGuardian once avunyelwe ukuthatha izakhi of UFilie Coutinho umdlalo ube ngowakhe. UMddison No: Imisebenzi ye-10 ayiboni nje ukuthuthukisa i-penchant yokufaka amagoli nokuqoqa izintambo. Thola ngezansi, isiqephu sobufakazi bevidiyo.
UJames Maddison waphetha umsebenzi wakhe wobusha njengomunye wabadlali abakhulu kunabo bonke abaqeqeshiwe esizukulwaneni sakhe seCoventry. Ngenxa yokwazi kwakhe ukushaya amaphuzu nokudala imigomo, waqashwa ukuba adlale imidlalo yeCage Football lapho adlula khona okulindelwe njengokujwayelekile.
James Maddison Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Ukuphakama Ekudumeni
Isizini se-2013-2014 sabona uMadison ehlanganiswa eqenjini lokuqala leqembu leCoventry lapho eqhubeka khona ukukhanya.
NgoJanuwari 2016, ngisho nalapho esezingeni lesithathu lebhola leNgqungquthela (League One), uMaddison wathandwa kakhulu yiqembu leNkulunkulu yeLigeria neLiverpool ngokuzimisela ukumthenga. Kodwa-ke, wazizwa ukuthi kwakungelona ithuba lokuthi adlale ebhola lebhola le-English.
UMaddison wanquma ukuthuthela eNorwich ngakho uzohlala esondelene nomndeni wakhe. Ezinyangeni ezilandelayo, ukusebenza kwakhe eqenjini lakhe bekubonile ukuthi uhlanganisiwe I-England ngaphansi kwe-21 izigcawu ngo-Mashi 2016.
Ukulandela isiqalo esihle se-2018 / 2019 seLeicester ngezinhloso ze-Premier League, emuva kwesikhathi Gareth Southgate waphoqeleka ukuba abize uJames Maddison kanye nanye inkanyezi yaseNgilandi UJadon Sancho kuya ithimba eliphakeme ngo-Okthoba 2018. Lo mdlalo othakazelisayo wambona iphupho likaMaddison lokudlala izwe lakhe akuseyona into eyadlula. Bonke abanye, njengoba bethi umlando.
James Maddison Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Ubudlelwano
Izingoma ezifihlakeleyo zikaJakobe Maddison yizona ezingabheki ukuhlolisisa iso lomphakathi ngenxa nje yokuthi impilo yakhe yothando iyimfihlo kakhulu futhi mhlawumbe ingadlali.
Iqiniso liwukuthi, uJames Maddison uye wakhetha ukugxila emsebenzini wakhe futhi uye wazama ukugwema noma yikuphi ukukhanya empilweni yakhe yangasese. Leli qiniso lenza kube nzima kithi ukuthi sibe namaqiniso mayelana nokuphila kwakhe ngothando nomlando wokuphola.
James Maddison Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Personal
Ukumazi uJames Maddison impilo yakhe kungakusiza ukuba uthole isithombe esiphelele ngaye.
UMaddison ungumuntu onomdlandla futhi onamandla futhi onengqondo evulekile futhi ohleka kakhulu. Umdlandla wakhe wokuphila futhi okubaluleke kakhulu umndeni wakhe awunamkhawulo. Lokhu kubonakala ekuziphatheni kwakhe okudlalayo nokuhlekisayo kubantu abathandayo.
James Maddison Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Komndeni
U-Maddison unenethiwekhi eqinile yokusekela kusukela emlandweni wakhe wesikhathi esisodwa ophakathi komndeni. Wonke umuntu unikeze isandla sakhe kuhlanganise nobaba wakhe othandekayo uGary Maddison njengoba kubonakala kuyividiyo yobusha bakhe ngezansi.
Naphezu kokwesekwa, uJames uyazi ukuthi ekugcineni kuye kuye ukwenza futhi abonise ukuthi angenzani emgodini. Naphezu kokumisa ubuhlobo nobaba wakhe enkantolo yebhola lezinyawo, uMaddison waziwa ukuthi usondelene kakhulu nomama wakhe njengoba kuvezwe emphakathini wakhe wezokuxhumana.
Bobabili umama wakhe nobaba basenomkhuba wokubukela bukhoma, umdlalo wabo wendodana yabo ngenkathi egcwele futhi bengenakucabangela ukuhamba nokuya ezweni ngezimpelasonto nangezinsuku zokubheka uJakobe enza lokho akwenzayo emkhakheni wokudlala.
James Maddison Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Amaqiniso angaziwa
UJames Maddison unengalo yakhe egcwele izidwebo ezithandwayo nje kuphela ngenxa yefashini. Zonke izinwele ezandleni zakhe zangakwesokunxele zikhethekile kuye.
UMaddison uthathe i-tattoo ukuze aveze amaqiniso emndenini wakhe onomsebenzi omkhulu kakhulu owenzayo; "Uthando lomndeni luyisibusiso esikhulu kunazo zonke ekuphileni. "
Futhi, lowo mzuzu okhethekile wobuqili bakhe obuchwepheshe ukhonjiswe njengomdwebo wesandla esandleni sakhe. Ngalolo suku iphupho lakhe lokuba umqeqeshi wezemidlalo ekugcineni lagcwaliseka.
UJames Maddison ubelokhu ebanjwe ehlakalweni oluhilela yena, abangane bakhe kanye nabanye iqembu labantu abangabazi. Uke waziqhayisa kubantu abangaziwayo ngesikhathi sokuhola imali engu-£ 7,000-ngesonto ngaphambi kokuba umngane wakhe ahlasele elinye lamadoda ngoba engamhloniphi uMddison njengodumo. Lapho ebuzwa ukuthi alandise lesi sigameko, omunye wabasolwa wathi;
"Uthe uthola i-£ 7,000 ngesonto. Uthe uyothola ngaphezulu ngenyanga ngaphezu kwalokho esikwenzayo ngonyaka. Akazange abuze lokho engakwenza. Uthe izicathulo zakhe zazingaphezu kwezingubo zethu. "
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda i-James Maddison Childhood Story kanye ne-Untold Biography Facts. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma uthola into engabonakali kahle, sicela wabelane nathi ngokuphawula ngezansi. Sizohlala sibazisa futhi sihlonipha imibono yakho.